'राजपा-फोरम एकता भित्रभित्रै अघि बढिरहेको छ' | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ असार ५ बिहीबार, ०६:४४
‘राजपा-फोरम एकता भित्रभित्रै अघि बढिरहेको छ’
२०७५ चैत्र ९ गते प्रकाशित, l १०:२९
केही दिनयता संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीचको एकताको चर्चा सुरु भएको छ । यी दुई दलले पार्टी एकताका लागि एकअर्कालाई चिठी पठाउनेदेखि त्यसको जवाफ दिनेसम्मको काम भइसकेको छ । तर दुवै दलले एकताका लागि केही शर्तहरु पनि अघि सारेका छन् । दुई दलको एकताका लागि फोरम पनि सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने शर्त राजपाले राखेको छ । एकता प्रक्रिया के भइरहेको छ भन्ने विषयमा राजपाका नेता राजकिशोर यादवसँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ?
राजपा आफैँमा ६ वटा दल एकता भएर बनेको दल हो । त्यसैले हामी एकताका लागि जहिले पनि तयार छौँ । मजबुत शक्ति बनाउनका लागि राजनीतिक विचार मिल्ने दलसँग एकता गर्न हामीलाई समस्या छैन । त्यसैले हामीलाई फोरमले पठाएको पत्रको जवाफ पनि दिइसक्यौँ ।
अहिले के भइरहेको छ ?
सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको छ । दुवैतर्फबाट विश्वासको वातावरण बन्दैछ ।
तपाईहरुले एकताका लागि फोरमलाई सरकारबाट बाहिरिन किन शर्त राख्नुभयो ?
यसलाई शर्तका रुपमा नबुझौँ । फोरमले हामीलाई पठाएको पत्रमा नेकपा र कांग्रेसलाई यथास्थितीवादी शक्ति भनेको छ । अनि हामीले त्यही नेकपासँग सरकारमा बस्न किन आवश्यक पर्यो भनेका हौँ । एकताका लागि वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो तर्क हो । हामी फोरमलाई इमानदारितापूर्वक एकताका लागि अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छाँै ।
फोरमले एकतापछि सरकारमा सहभागिताबारे छलफल गरौँला भनेर जवाफ दिएको छ । अब के हुन्छ ?
अहिले नै टुङ्गो लागिहाल्ने विषय होइन । हामी छलफलमै छौँ । अहिले नै धेरै चर्चा गर्न आवश्यक छैन । हामी नतिजा निकाल्नका लागि गम्भीर छलफल गर्छौँ । हाम्रो भित्रभित्रै तयारी छ ।
सिके राउतले जनमत पार्टी गठन गरेपछि तपाईहरुलाई एकता गर्न हतार भएको हो ?
त्यस्तो होइन । राजपा त स्थापनाकालदेखि नै एजेण्डा मिल्नेसँग एकता गर्दै आएको छ । हामी मुद्धाकेन्द्रित भएर राजनीति गर्दैछाँै । चुनावमा हामीले कस्तो नतिजा ल्यायाँै भन्ने त स्पष्ट छ नि ।
मधेशमा तपाईहरु कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ नि ?
तपाईले के आधारमा राजपाको जनआधार घट्यो भन्नुभएको हो ? यो त कुण्ठित र रोगी मानसिकताको उपज हो । काठमाण्डौमा बसेर जनताको बीचमा नजानेहरु तथाकथित विश्लेषक भएर गरेको तर्क सही हुँदैन । राजपासँग अपार जनसमर्थन छ ।
२०७५ चैत्र ९ गते सम्पादित l १३:०४